Tranga faharoa io ka amin’ny alalan’ny antsoina hoe “ transplantation de cellules souches” no nentina nanaovana ny fitsaboana. Araka ny tatitra « The Lancet HIV », dia olona iray nitondra io tsimokaretina io no efa tsy nahitana izany intsony tao anatin’ny 30 volana, ka nantsoin-dry zareo Anglisy hoe «le patient de Londres». Ny martsa 2019, dia nilaza ny Profesora Ravindra Gupta, ao amin’ny Oniversiten’i Cambridge, fa ny taona 2003 io olona io no fantatra fa nitondra ny tsimokaretina VIH, ary efa 18 no tsy nahitana an’io intsony tao amin’ny vatany. Manomboka misy tsirim-panantenana izany ny fitsaboana ny VIH na dia sarotsarotra aza. Manodidina ny 38 tapitrisa ny olona mitondra azy io maneran-tany, kanefa ny 62% amin’ireo ihany no manaraka fikarakarana ara-pitsaboana. Manodidina ny 800 000 ny olona matiny ho an’ny taona 2018.